မလိုအပ်ဘဲ ဖုန်းကြည့်ရှုချိန်များပြားနေခြင်းအား Viber မှ ကူညီလျှော့ချပေးနိုင် - Lifestyle Myanmar
သင့်အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ဖုန်းဘယ်လောက် အသုံးပြုဖြစ်နေသလဲ သိပါသလား?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေ့စဥ် အင်တာနက်နဲ့ လူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူ ၂၂ သန်းခန့် ရှိနေပြီး လူဦးရေ စုစုပေါင်းရဲ့ ထက်ဝက်နီးပါးဟာ ဗွီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်း၊ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုခြင်း၊ ဂိမ်းဆော့ခြင်းနဲ့ အခြားဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှ ၅ နာရီခန့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အချိန်ကုန်ဆုံးလျက် ရှိကြပါတယ်။ အခုလို ရောဂါမပြန့်ပွားဖို့ နေအိမ်မှာ နေကြရတဲ့ ၇ လတာကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဖုန်းအသုံးပြုမှု ဘယ်လောက်မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိပါသလား။ လူမှုကွန်ယက်ကို စွဲလန်းစွာအသုံးပြုခြင်းရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဥ်တွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ Netflix ရုပ်သံအစီအစဥ် The Social Dilemma ကို သင်ကြည့်ရှုပြီးပြီဆိုရင်တော့ သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အွန်လိုင်းအလွန်အကြူး အသုံးပြုမိနေခြင်းကို ပြန်သုံးသပ်မိကောင်း သုံးသပ်မိနိုင်ပါတယ်။ အက်ပလီကေးရှင်းတွေ ပိုပြီး အသုံးပြုဖို့၊ post တွေ ပိုတင်ကြဖို့၊ Newsfeed ကို ဆက်တိုက် ဆက်ကြည့်နေမိဖို့ စသဖြင့် လွှမ်းမိုးစေခိုင်းခြင်းခံနေရသလိုမျိုး အလွန် စွဲလမ်းစေတတ်တဲ့အတွက် စိတ်ပညာသဘောအရကြည့်မယ်ဆိုရင် အသုံးပြုသူတွေ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေမှာ စိတ်ကျရောဂါနှင့် အခြားစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်လေးချက်ကတော့ သင်ဘာကြောင့် ဖုန်းအသုံးပြုချိန်တွေကို ကန့်သတ်ထားသင့်သလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
အမြင်အာရုံနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများ
American Optometric Association (AOA) ၏ လေ့လာချက်အရ ဒီဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်သို့ မကြာခဏကြည့်ရှုနေခြင်းက မျက်လုံးအား ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်ရစေတဲ့အတွက် အမြင်အာရုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က တစ်နေ့မှာ နှစ်နာရီ သို့မဟုတ် နှစ်နာရီထက်ပိုပြီး ဒီဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်ကို ဆက်တိုက်ကြည့်ရှု အချိန်ကုန်ဆုံးမိနေတယ်ဆိုရင် Computer Vision Syndrome (CVS) ဆိုတဲ့ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာ ခံစားရနိုင်ချေ မြင့်မားပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ကတော့ မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇာတ်ကြောတက်ခြင်းနှင့် နောက်ကျော နာကျင်ခြင်း စတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ နေ့စဥ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
အိပ်ရာမဝင်ခင်အချိန်မှာ လူမှုကွန်ယက်ကို မရပ်မနားအသုံးပြုနေမိပါသလား? ဒါဟာ သင်မနက်နိုးထတဲ့အခါမှာ စိတ်လက်မကြည်မသာ ဖြစ်နေခြင်းရဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ညအိပ်ရာမဝင်မီ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းက Melatonin ဟော်မုန်း ထွက်ရှိမှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ညဖက်မှာ ကောင်းမွန်ပြည့်ဝစွာ အိပ်စက်မရနိုင်ခြင်းနဲ့ မနက်နိုးထတဲ့အခါ နိုးကြားတက်ကြွမှုမရှိခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့လည်း SleepFoundation.org မှ သတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။
ဇာတ်ကြောတက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်နေဟန်ထားဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
စမတ်ဖုန်းနှင့် လပ်တော့ပ်များ အသုံးပြုတဲ့အခါ ဦးခေါင်းကို ရှေ့သို့စိုက်၍ ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပခုံးများကိုမြှင့်တင်ထားခြင်း၊ နောက်ကျောကိုင်းထားခြင်း၊ အောက်သို့စိုက်၍ အသုံးပြုခြင်း စတာတွေက ဇာတ်ကြောတက်ခြင်းနှင့် အခြားသော နောက်ကျောဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ ခါးနာခြင်း စသည်တို့ကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလက္ခဏာတွေကတစ်ဆင့် နောက်ကျောနဲ့ ကျောရိုးရှိ ကွေး၊ ဆန့်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး နာတာရှည် အဆစ်အမြစ်နာကျင်ခြင်းနှင့် သင်၏ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်မှုကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်တတ်ပါတယ်လို့လည်း ကျောရိုးနဲ့ အဆစ်အမြစ် ကုသပေးသူများမှ သတိပေးထားပါတယ်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှု ပြဿနာများ
သင်တစ်စုံတစ်ခုအကြောင်း ပြောပြီး မကြာမီမှာ သင့်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ထိုအကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်သည့် ကြော်ငြာတက်လာမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိပြုမိဖူးပါသလား? အချို့သော လူမှုကွန်ယက်တွေက သင်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ like, comment, share နဲ့ အခြား ကြည့်ရှုများ အားလုံးကို စုဆောင်းလေ့လာပြီး ကြော်ငြာရှင်များထံသို့ မျှဝေလိုက်တဲ့အတွက် ထိုအချက်အလက်တွေအရ သင့်ဆီကို ကြော်ငြာတွေ ရောက်ရှိလာတာပါ။ ဒီလို မျှဝေလိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေထဲမှာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စာတိုပေးပို့မှု private message တွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုပြီး ဝင်ရောက်ရတဲ့ အခြားသော အက်ပလီကေးရှင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဂိမ်း၊ filters နဲ့ polls တွေ ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ရယူနိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံလေ့ရှိကြပြီး ထိုအချက်အလက်များအား မည်သို့မည်ပုံ အသုံးပြုမည်ကို ထုတ််ပြန်ခြင်းမရှိကြပါ။
ဒါတွေကို ကြုံတွေ့နေရတာ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Pew Research Center ရဲ့ လေ့လာချက်အရ ၉၁% သော ဖြေကြားသူတွေက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေက ရယူအသုံးပြုနေကြတာကို မည်သို့မည်ပုံ ထိန်းချုပ်ရမည်ကို မသိပါဟု ပြောကြားထားပါတယ်။
COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ပြည်သူတွေက အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ စျေးဝယ်ယူခြင်း၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆက်သွယ်ခြင်းတွေကို နေအိမ်ကနေပဲ ဒီဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်တွေပေါ်ကနေတစ််ဆင့် ယခင်ထက်ပိုမိုအသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူမှုကွန်ယက်မှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အချိန်ကုန်ဆုံးနေမိခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို သိထားပြီးပြီဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာရော၊ စိတ်ကျန်းမာရေးပါ မထိခိုက်အောင် အွန်လိုင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေရပါတော့မယ်။ ကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားမိဘဲ newsfeed ကို နာရီပေါင်းများစွာ ပွတ်မိနေမယ့်အစား တကယ်လိုအပ်တဲ့ အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုတွေကိုပဲ ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ ဥပမာ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုတွေနဲ့ ဗွီဒီယိုကောလ် ခေါ်ဆိုခြင်းက ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ ဖုန်းကို အသုံးပြုမိနေခြင်းထက် စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ ပြေပျောက်စေပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက်သည် အသုံးပြုသူများ၏ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို အသုံးချပြီး မည်သို့အသုံးချမည်ကို မသိရှိနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ချရတဲ့ ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Viber ကဲ့သို့ ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လူဦးရေအယောက် ၂၀ အထိ ဗွီဒီယိုကောလ် ပြောဆိုနိုင်ပြီး သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုတွေနဲ့ ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်မှာ အဆက်အသွယ်မပြတ် ရှိစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိနဲ့သိကျွမ်းသူ၊ ယုံကြည်ရသူများနဲ့သာ ဆက်သွယ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး မလိုအပ်ပဲ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ကြည့်ရှုအသုံးပြုနေခြင်းကလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
Viber က အသုံးပြုသူတွေရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို အလေးထားတဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေ၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကို အခြားအပြင်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ အချက်အလက်တွေ ရယူဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဒီအချက်အလက်တွေအသုံးပြုပြီး ကြော်ငြာများမှတစ်ဆင့် သင်ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်မယ့် အက်ပလီကေးရှင်းတွေ ပြသပြီး ဖုန်းမျက်နှာပြင် ကြည့်ရှုချိန်ပိုမိုများပြားစေမယ့် ကိစ္စရပ်တွေလည်း ဖြစ်စေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သင်ကိုင်တဲ့ဖုန်းက Android မို့လို့၊ iPhone မို့လို့ဆိုပြီး မရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုဖုန်းအမျိုးအစားကိုပဲသုံးသုံး၊ သင့်အတွက် အသုံးဝင်ဖို့ကပဲ အရေးကြီးပါတယ် ဖုန်းလောကမှာ Android နဲ့ iOS ဆိုပြီး အပြိုင်အဆိုင်ရှိနေပြီး Apple ရဲ့ စျေးနှုန်းကြောင့် လူတန်းစားတစ်ရပ်ကပဲ...